अब महिलाले महिलालाई सम्मान गरौ !!! - नेपालबहस
मेरो देश बुद्धको भूमी जसले आफ्नो दुश्मनको समेत सम्मान हामीले गर्नुपर्छ भन्दै सारा विश्वलाई सिकायो। मेरो देश जसले मानव धर्म र संस्कृतिलाई विश्वभर फैलाउदै हिड्ने गरेको छ ।
८ मार्चमा हामी लगायतका विश्वभरि महिला सम्मान दिवस अर्थात् महिला दिवस मनाउदै छौ । हाम्रो हिन्दु संस्कृतिमा महिला लाई सम्मान गरेर भनिन्छ। ‘जहाँ नारी सम्मानित हुन्छिन् त्यहाँ देवता र धर्म संस्कारको सधै बास भै रहन्छ’ । हाम्रो नेपाली समाजमा महिलालाई प्रेम, ममता र करूणाको प्रतिमूर्ति मानिन्छ। खासमा भन्ने हो भने हिन्दु समाजमा नारी भनेको पुजनिय र बन्दनिय हो भनेर माताको रूपमा पुजिन्छ।
किन यो देशका जनताहरूको भावना र बिचार यति धेरै नकारात्मक हुदैछ ?
साँच्चै भन्ने हो भने नारी बिना सृष्‍टिको कल्पना असम्भव हुन्छ । यस्तो अबस्थामा किन सिर्फ मार्च ८ मा मात्र महिलाको सम्मान गरिन्छ अरू बेला किन गर्दैनौ भन्ने प्रश्न मेरो यो देशका नागरिकहरू सित छ। किन नारी दिवसमा मात्र महिलालाई सम्मान गर्ने अन्य दिन पनि नारी दिवस जस्तै सम्मान किन गरिदैन ? मार्च ८ लाई महिलालाई सम्मान प्रदान गर्ने दिन भनेर भनिन्छ तर त्यो सिर्फ देखावटी दिवस मात्र हो ।
किनभने हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज हो । आज पनि हरेक घरघरमा महिलालाई पुरूष भन्दा तल नै मानिन्छ चाहे ऊ मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै किन नहोस । पुरूषले भन्दा बढि महिलाले महिलालाई नै सम्मान गर्न सकिराखेका छैनन् ।
किन यो देशका जनताहरूको भावना र बिचार यति धेरै नकारात्मक हुदैछ ? त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। अबको भावी पिँढी पनि यस्तै नकारात्मक प्रभावमा पर्दै जाने हो भने अबको दश बीस बर्षमा नेपालमा आज जुन घटिरहेको दर्दनाक घटना हत्या हिंसा र पत्याउन नसक्ने घटनाहरु ‘आमाले सानो बच्चाको घाटी रेटेर हत्या’ जस्ता घटना घर घरमा हुन बेर छैन किनभने हामी आफ्नो घरमा बिहानदेखि रातिसम्म नकारात्मक कुरा गर्ने, केही कुरामा पनि सकारात्मकता नदेख्ने संस्कार जन्माई रहेका हुन्छौं, जसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्छ जसको असर हाम्रो बालबालिका माथि नी पर्छ।
उच्च ब्यक्तित्व पनि महिला भएकै कारण हेपिन्छन् भने हामी जस्ता सर्वसाधारण महिलाको अबस्था कस्तो होला ?
जो भविष्यमा झनझन नकारात्मक हुदै गएर नराम्रो र सोच्नै नसक्ने काम नी गर्न पछि पर्दैनन्। जसको नकारात्मक असर हाम्रो जीवनमा मात्रै होइन हाम्रो पुर्खौ पुर्खासम्म पर्छ तसर्थ सकारात्मक सोचले जीवनमा अघि बढ्औ।
महिला आमा हुन् महिला देवीको रूप हुन् भन्ने संस्कारबाट हुर्केका हामी नेपाली नै पहिलो मानव होला जसले आफ्नो आमा र बाबालाई बर्षमा एकपटक आमाको मुख हेर्नै भन्दै सम्मान र पुजा गर्ने संस्कार लिएर जीवन जीईरहेका छौ जुन संस्कारलाई आज आएर बिश्वको अन्य राष्ट्रमा पनि मदर डे नामले सुरूवात गरेको छ। यस्तो देश हाम्रो जहाँको संस्कृति र संस्कारलाई बिश्वले पुज्दै आएको छ आज हामी किन बिर्सेछौ हाम्रो संस्काररु भनेर प्रश्न गर्न मन लागेको छ।
नेपाललाई आमा भनेर संबोधन गर्ने, दुर्गा माताको पुजा गर्न भनेरै दश दिन सम्म नवरात्री बर्त बसेर आमा र महिला शक्तिको पुजा गर्ने हाम्रो समाज आज एउटा महिलालाई देशको गौरवशाली पद राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राखेर सम्मान गरेको किन हेर्न सक्दैन ? हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार प्रदान गरेको छैन।
जब जब सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूको बिरोधमा लेखहरू पढ्दा मलाई ती पुरुषलेखक प्रति दया लागेर आउँछ
के हाम्रो सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यू सरकार प्रमुख हुन् र उहाँले के काम गर्नु भयो भनेर प्रश्न गर्नेरु अन्य राष्ट्रको राष्ट्रपतिहरूसँग तुलना गरेर उहाँ माथि टिका टिप्पणी गर्ने । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार नै प्रदान गरेको छैन उहाँले जति पनि काम गर्नु हुन्छ त्यो सबै मन्त्रीपरिषदको र संसदको निर्देशनमा गर्नु हुन्छ। यस्तो अबस्थामा पनि किन हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती बिध्या भण्डारीज्युको बिरोध गरेको हो त्यो बुझ्न सकेको छैन ।
एउटा कुनै कामको उदाहरण छ पुरूष राष्ट्रपति हुदां गरेको महिला राष्ट्रपति ज्युले नगर्नु नभएको ? एउटा महिला जसको श्रीमान बितिसकेका छन्, जो देशको गरिमामय पदमा बहाल हुनुहुन्छ भने यस्तो उच्च ब्यक्तित्व पनि महिला भएकै कारण हेपिन्छन भने हामी जस्ता सर्वसाधारण महिलाको अबस्था कस्तो होला त्यो आकलन सबै महिलाले गर्नै पर्छ। देशको सम्मानित ब्यक्तिसंग महामहिम राष्ट्रपति ज्यूको चरित्र हत्या गर्ने समेत फोटो प्रदर्शनीलाई उल्टै हामी महिलाले नै आ -आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेको देख्दा थुक्क मेरो समाज भन्न मन लागेको छ।
एउटा महिलालाई महिलाले नै हाँसोको पात्र बनाउँछौ जब की उहाँले कुनै नराम्रो काम गर्नु भाको छैन। जब जब सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूको बिरोधमा लेखहरू पढ्दा मलाई ती पुरुषलेखक प्रति दया लागेर आउँछ के अध्ययन गरेछन् बिचराहरुले जुन अध्ययनबाट नेपाली संस्कार, आमा र महिला प्रति संम्मान भन्ने सिकेनन् भने अरू के- सिके होला तिनी बिचराहरूले जस्तो लाग्छ।
धिक्कार त्यस्ता महिला जसले आफ्नो अस्मिता माथि प्रहार हुदाँ पनि चुपलागेर बस्दै आएका छन् ।
पढेर डिग्रीमात्र भएर हून्न संस्कार पनि हुनुपर्छ र आफ्नो देशको संस्कार लाई भुल्नुहुँदैन। महिलाकर्मी महिला आयोग र महिला हितसंग सम्बन्धित कहा गए ? महिलाको सम्मानको लागि लडँदै आएका का गए ? जहाँ उच्च गरिमामय पदमा ब्यक्तिमाथि महिला भएकै नाताले यत्रो अपमान हाम्रो राष्ट्रपति ज्यू माथि बारम्बार भै रहेको छ।
खै कहाँ गए महिला को पक्षमा वकालात गर्नेहरू ? की उनीहरू पनि कुनै राजनीतिक दलको झोले कार्यकर्ताहरू त होइनन्रु सुजाता कोइराला, पम्फा भुसाल, हिसिला यमी, हिमानी शाह यदि यो पदमा भएको भए नी यसरी नै हेरिरहन्थ्यौ त महिला आयोगका नेत्रीज्युहरु राजनीति बिस्वास र आस्थाको आधारमा महिला माथिको हिंसालाई र महिला माथिको अपमानलाई हेर्नु भनेको सबैभन्दा निच काम हो।
निर्मलाको हत्या प्रकरणमा दोषी समात्न नसक्नु पनि यहि राजनीतिकरण हो। एउटा महिलालाई बलात्कार गर्ने ब्यक्ति खुलेआम हिडिरहदा राजनीति आस्थाको आधारमा घटनालाई अर्कैतर्फ मोडी महिलाहरूले बिभिन्न आयोगको नाममा हत्यारा पत्ता लगाउन अबरोध सृजना गरि रहेको स्थिति छ।
धिक्कार त्यस्ता महिला जसले आफ्नो अस्मिता माथि प्रहार हुदाँ पनि चुपलागेर बस्दै आएका छन् । एक त आफ्नो राष्ट्रको गरिमामय पदमा आसिन ब्यक्ति जो भन्दा माथि कोही छैनन् भने पछि उहाँ प्रति सम्मान प्रकट गर्नु एउटा नागरिकको दायित्व नै हो । त्यसैमाथि महिलाको गरिमालाई उच्च राख्न सफल भएको राज्यमा एउटा महिला राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीवहन गरेको ब्यक्तित्व माथि पटक पटक प्रहार गर्दै आफ्नै स्तर देखाउने गरि टिप्पणी गरेको देख्दा धिक्कार मेरो राष्ट्र जसका जनता आखां चिम्लेर अरूको कुरा सुन्ने र महिला राष्ट्रपति वा राष्ट् अध्यक्ष माथि भएको अपमानलाई हाँसी हाँसी हो मा हो मिलाउने जनताको भारले थिचिएको देख्दा आफ्नो राष्ट्रप्रति टिठ लागेर आउँछ।
के संस्कार सिक्लान हाम्रो देशको बालबालिकाहरूले कहिले सोच्नु भएको छ ? के उनीहरूले पनि आफ्ना आमा दिदी बहिनीहरू प्रति यस्तै अपमान गर्न थाले भने हाम्रो मन खुशीले नाच्ला त ? पछिल्लो समय बिश्वको राजनीतिमा महिलाको बाहुल्यता धेरै नै बढेको छ। १९९० यता करिब ३० राष्ट्रमा राष्ट् अध्यक्ष र सरकार प्रमुख मा महिलाको बाहुल्यता देखिन्छ। संसारभरिको देशहरुमा महिलालाई नीति निर्माण तहमा पठाउन बिशेष ब्यबस्था आफ्नो संविधानमा नै उल्लेख गरेर गरेको छ।
हामी नेपाली महिलाले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई महिला भएकै कारणले सम्मान प्रदान गर्न सकेनौ।
नेपालमा ३० प्रतिशत महिलालाई निश्चित कोटा छुट्याइएको छ। अफगानिस्तानको संविधानमा महिला कोटा २५ प्रतिशत रहेको छ स्विडेनमा ४५ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने अमेरिकामा सिर्फ १५ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ। यसरी महिलालाई अधिकार दिइ सम्मान गर्ने मुलुक नेपाल नै देखिन्छ किनभने उसले महिलालाई सम्मान गरेर एकै समयमा सरकारका तीनै वटा अंगहरूका प्रमुख महिलालाई नै बनाएर बिश्व रेकर्ड कायम गरेको छ।
महिला बिरूद्को हिंसा हाम्रो नेपाली समाजमा प्रत्येक तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म रहेको छ। महिला भएकै कारण उनीहरूले जीवनभर अरूको लैङ्गिक हिंसाका सिकार हुन्छन्। उनीहरू प्रति दुरब्यबहार, र अपमान भएको पाइन्छ जसको शिकार हाम्रो राष्ट्रपति महोदयाले समेत ब्यहोरन पर्यो।
बिश्वको कुनै पनि मुलुकमा बिशिष्ट महिला ब्यक्तित्वलाई यसरी नराम्रोसँग गाली गर्ने र वहालाई बेइज्जत गर्ने काम भएको छैन होला जति हाम्रो देशको राष्ट् अध्यक्ष माथि भएको छ। जसको शिकार कुनै बेला जो सुकै नेपाली महिला नै हुनेछन् । किनभने हामी नेपाली महिलाले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई महिला भएकै कारणले सम्मान प्रदान गर्न सकेनौ।
नेपाली महिला लाई सधै सम्मान गरौ र माया पनि गरौ।
साथै ठूलालाई सम्मान र सानालाई माया भन्ने संस्कार हामीले अझैसम्म पनि आफ्ना भबिष्यका कर्णधारलाई सिकाउन सकेनौ भने देश बुद्ध को भूमी भन्नु र कराउनुको कुनै तुक छैन। बुद्ध जसले आफ्नो दुश्मनको समेत सम्मान हामीले गर्नु पर्छ भन्दै सारा बिश्वलाई सिकाए तर आज त्यही देशका जनता दुश्मनको सम्मान को त कुरै छोड्औ एउटा राष्ट्र प्रमुख जसले कुनै गल्ती गरेकी छैनन् उसको अपमान गरेको सुन्दा र हेर्दा मलाई लाग्छ हामी नेपाली जनता जसले बुद्ध जन्मेको देशका जनता भन्ने एउटा प्रमाण समेत आफ्नो ब्यबहारबाट देखाउन नसक्दा धिक्कार रहेछौ भन्छु। मानव धर्म र संस्कृतिलाई बिश्व लाई सिकाउदै हिड्ने गरेको मेरो नेपाल देश, किन यो देश का भाबना र बिचार् यति धेरै नकरात्मक हुदै छरु त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन ।
ठूला लाई सम्मान र सानालाई माया भन्ने संस्कार हामीले सिक्न जरुरी नै छ। त्यस्तै गरी हामी महिला दिदी बहिनी हरू नै आजबाट महिला अन्य दिदी बहिनी लाई माया र सम्मान दिन्छौ भन्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो सम्मान त बढ्छ बढ्छ हाम्रो भविष्यका संततीले पनि संस्कार सिक्ने छन् र आमा दिदी बहिनी र पत्नी को पनि सम्मान अबस्य गर्ने छन्।
त्यसैले नेपाली महिलालाई सधै सम्मान गरौ र माया पनि गरौ। पछिल्लो समय एउटा पत्रकार को आत्महत्या पस्चात उत्पन्न भएको स्थितिमा पत्रकार की पत्नी जसको सम्पूर्ण जीवन नै फगत रित्तो भएको छ उ प्रति कसैको सहानुभूति देखिएको छैन कुनै महिलाले समेत सो पत्रकार र उसको पत्नीलाई न्याय चाहिँयो भन्न सकिरहेका छैनन् बरु उल्टै बहुविवाहलाई सामान्य मानेर बस्ने प्रति नतमस्तक भएको समाज आज हामी नेपालीको रहेको छ। कुनै पुरुष ब्यक्तिले टेलिभिजन मार्फत हो मैले चार वटासंग बिबाह गरेकै हो भन्ने भिडियो सार्वजनिक गर्दा एक घण्टामा चौधहजारले लाईक गरे ।
जसमा करिब तेह्र हजार महिला थिए। यो देख्दा अब बहुविवाहलाई पनि हाम्रो देशका महिलाले स्विकार गरेको मैले सोच्न बाध्य भएकी थिए । यस्तै समाज भै राख्ने र पटक पटक महिला नै दबिनु पर्ने हो भने अब नेपालमा महिला अधिकारलाई महिलाले नै हाँसोको बिषय बनाएको ले हटाउनु पर्ने त होइन भनेर म सम्पूर्ण नेपाली महिलासंग प्रश्न गर्न चाहन्छु।
एकपटक आत्मामा हात राखेर सोच्नु होला मेरा महिला दिदी बहिनीहरू। तीज पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
लेखिका पाटन संयुक्त क्याम्पसमा राजनीति शास्त्र अध्यापन गराउछिन् ।
महिला सम्मान दिबस
अघिल्लो लेखनेपाल चेम्बर अफ कमर्श र मेडिसिटी हस्पिटलबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
अर्को लेखसवारी साधनबाट जबरजस्ती रकम असुल गर्ने पक्राउ